फागुनको अन्तिम दिन अर्थात ३० गते शुक्रबार बिहान सवा ८ बजे अनामनगर–घट्टेकुलोस्थित डेरा पुग्दा चित्रबहादुर केसी भित्तामा झुन्ड्याइएको घडी हेर्दै थिए । अन्तर्वार्ताका लागि मागेको
पाँच सातअघि नेकपाको केन्द्रीय कमिटी बैठक बस्यो । त्यसले नयाँ उत्साह दियो । तर, बैठकमा नेतृत्वले दुई सातामा पूरा गर्छु भनेका प्रतिबद्धता अझै पूरा भएनन् । यसले कार्यकर्ता तहमा फेरि
शेरबहादुर तामाङ, प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा पूर्वकानुनमन्त्री केन्द्रीय समितिका बैठकपछि कार्यकर्तामा उत्साह सञ्चार भएको थियो ? तर, बैठकका निर्णय कार्यान्वयनमा जुट्नुपर्ने बेला शीर्ष नेताहरू विभाजित देखिन्छन् । खासमा केन्द्रीय समितिको स्पिरिट
डा. चन्द्रमणि अधिकारी, अर्थविद् घोषणापत्रमा आगामी दश वर्षमा प्रतिव्यक्ति आम्दानी कम्तीमा पाँच हजार डलर पु¥याउने भन्यौँ । यो सरकार बन्दा हाम्रो प्रतिव्यक्ति आम्दानी ८५० बाट बढेर बल्ल एक हजारमा टेक्दै
लामो समयपछि बसेको केन्द्रीय समितिको बैठक तपाईंको अनुभवमा कस्तो रह्यो ? नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको एकीकरण प्रक्रियामा पुरानो पार्टी विघटन भएर नयाँ पार्टी निर्माण भएपछि त्यो पार्टी एकीकरणलाई अनुमोदन गर्न तथा
लामो समयपछि केन्द्रीय कमिटीको बैठक बस्यो । मूलतः यो बैठकको सन्देश के हो ? सबैभन्दा पहिलो कुरा त, यो बैठकले लामो समयसम्म पार्टीको बैठक नभएर जमेर बसेको स्थितिलाई गतिशीलतातर्फ उन्मुख
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले नेपालमा भ्रष्टाचारको अवस्थाबारे यसै साता प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । प्रतिवेदनमा भ्रष्टाचारमा केही कमी आएजस्तो देखिन्छ । तर, आम मानिसहरू भ्रष्टाचार बढेको छ भनिरहेका छन् । के मुलुकमा
कुराकानी अहिलेको सबैभन्दा बढी बहसमा रहेको र दूरगामी महत्वको देखिने मिलेनियमन च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसिसी)बाटै थालौँ । एमसिसी अन्तर्गतको ५० करोड अमेरिकी डलर अनुदान सहयोगको विषयमा पार्टीभित्रै मतान्तर देखिन्छ । खासमा
सभापतिले महाधिवेशनको मिति तोकिसक्नुभयो, त्यसमा तपार्इंंहरुको सहभागिता रहन्छ कि रहँदैन ? मिति त तोक्नुभयो, त्योभन्दा पहिला उहाँले परामर्श गर्नुपथ्र्यो । समयमै महाधिवेशन होस् भन्ने त हाम्रो पनि चाहना छ ।